कुन कुन देशका लागि सिफारिस भए राजदूत? यी हुन् मन्त्रिपरिषद्‍का निर्णय
नेपाल लाइभ बिहीबार, असोज १५, २०७७, २१:०५
काठमाडौं- सरकारले विभिन्न देशमा आवासीय र गैरआवासीय नेपाली राजदूत पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ। बिहीबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न देशका लागि आवासीय र गैरआवासीय राजदूत पदका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो।
पूर्व अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडालाई संयुक्त राष्ट्र अमेरिकाका लागि आवासीय राजदूत पदमा सिफारिस भएका छन्। उनी पनामा, कोस्टारिका, मेक्सिको, होन्डुरस, ग्वाटेमालाका लागि गैरआवासीय नेपाली राजदूत पदका लागि पनि सिफारिसमा परेका छन्।
त्यस्तै पूर्व मूख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई संयुक्त अधिराज्य बेलायतका लागि आवासीय राजदूतमा सिफारिस गरिएको छ। गणतन्त्र आयरल्याण्डका साथै गणतन्त्र माल्टाका लागि पनि उनलाई गैरआवासीय नेपाली राजदूतका लागि सिफारिस गरिएको छ।
विद्युतीय कारमा लगाइएको अन्त:शुल्क ८० प्रतिशतसम्म छुट दिने सरकारको निर्णयबिहीबार, असोज १५, २०७७
त्यस्तै डा. निर्मल कुमार विश्वकर्मालाई दक्षिण अफ्रिकाका लागि आवासीय राजदूतमा सिफारिस गरिएको छ। उनी बोत्सुवाना, केन्या, कंगो, तान्जानिया, जाम्भिया, जिम्भावे, ज्ञावेनलगायतका देशका लागि गैरआवसीय राजदूतका लागि समेत सिफरिसमा परे।
सिफारिसमा परेकाहरूलाई संसदीय सुनुवाई समितिले सुनुवाई गरेपछि राष्ट्रपतिले सम्बन्धित देशका लागि राजदूत नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ।
सरकारले नियुक्ति गर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीमा छलफल गर्ने भने पनि सोअनुसार नभएको भन्दै पार्टीभित्रैबाट उनको विरोध सुरु भएको छ।
यी हुन् मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू